Tonga soa eto amin’ny Blogn”i Valisoa – Zaza no iriako
Anio 17 Febroary taona 2015
Androany aho dia nanokatra ny blog ” Ho reny ve aho indray andro any?”, misy fanirina mafy ato amiko,maniry mafy aho ny ho RENY,indry mantsy ,tsy vitanay mivady irery zany fanirina izany fa tsimaintsy miakina amin’ny SCIENCE zahay. Ary izany rehetra izany dia Andrimanitra mahalala ny mahasoa anay. Efa natoky azy aho hatramin’ny voalohany ary mbola mino sy matoky fitantanany ahy amin’ny dia izay hataoko.
Haiko fa misy vehivavy malagasy manana olana tahaka ahy, nefa tsy sahy ny miresaka satria matahotra ny esony fiaraha-monina, Izaho koa dia toy izany, misy fatahorana ato amiko ,nefa mba te-hizara ka izay no namoronako ilay solonanarana “Valisoa”.
Nataoko koa ny blog mba hanamavainako ny alahelo izay mitambesatra ato amiko,sy mba hizarako zay mba fahalalako sy handrefesako ny lalana ho diaviko.
Ialako tsiny mialoha raha mifangaro amin’ny teny vahiny ny voambolana hampiasaiko eto,ary mialatsiny koa aho raha misy ny tsipelina diso eny anelanelany eny fa tsy dia mahay miresaka firy mantsy aho,fa kosa hiezaka aho hanao fehezan-teny fohy ary mazava.
Misaotra anao mialaho ny namaky sy manaraka ny asasoratrako
Afaka mandray anjara enao amin’ny alalan’ny fametrahana hafatra.
Tagged familly, fiv, fiv malagasy, malagasy, taranaka, zaza